Muxuu yahay walaaca laga muujiyay qorshaha maamul dhisidda Galmudug? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Muxuu yahay walaaca laga muujiyay qorshaha maamul dhisidda Galmudug?
Qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay inuusan dastuurka waafaqsanayn qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay Shirkii dib uheshiisiinta ee lagu soo gabagbeeyay Dhusamareeb Talaadadii.
War murtiyeed ay soo saareen ayay Dowladda Federaalka uga digeen inay “afduubto doorashooyinka Galmudug” iyo in Maamulka dowlad goboleedka Galmudug loo daayo soo xulista guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Galmudug.
“Qodobadan iyo kuwo kale oo war-murtiyeedka ku jira ayaa si cad u khilaafsan hanaanka federaalnimada dalka, Dastuurka qaranka iyo dastuurka dawlad Goboleedka Galmudug oo labaduba qeexaya in doorashooyinka Galmudug ay u madaxbanaan yihiin dawlad Goboleedyadu”, ayaa lagu sheegay war murtiyeedka.
“War-murtiyeedku wuxuu inkarayaa jiritaanka dawlad Goboleedka Galmudug, wuxuuna gebi ahaanba meesha ka saaray saamilayda siyaasadeed ee Galmudugu sida; dawlad Goboleedka Galmudug, waxgaradka Galmudug, Guddoonka shirka Hobyo, Musharaxiinta xilka madaxweyne, iyo Xisbiyada diiwaan gashan ee dalka”, ayaa lagu xusay war murtiyeedka.
Image captionDowladda ayaa lagu eedeeyay inay afduubtay qorshaha maamul u dhisida Galmudug
“Anagu waxaan rabnaa in Dowlad Goboleedka Galmudug ay magacawdo, in uu noqdo guddi karti iyo hufnaan lagu soo xulay, in uu noqdo guddi ay u dhan yihiin belaha wada degan Galmudug, “, ayuu BBC-da u sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Waxaa kale oo uu sheegay in gudiga ay tahay in uu dejiyo habraaca doorashada, go’aanna ka gaaro qofka xil ka qabanaya Galmudug, kadiban uu mas’uuliyadda la wareego barlamaanka la dooran doona ee Galmudug.
“Waxaa lagu heshiiyay in la dhiso Galmudug, oo gogol xaarkan uu bixiyo soo jeedino iyo go’aano uu qaatay, go’aanadii na waa uu qaatay, wax Alle wixii xal u baahan na waxaa ku ridnay laba khaanadood- khaanadda koowaad waa tan shirka soo socda ee xulista xiildhibanaada, su’aalahana waxay ka taagan yahay Yaa ah dhaqankii saxda ah Yaase ahayn? Qeybta labaadna waxaa waaye khilaafaadka beelaha dhexdooda, taas na waxaan u rarnay dowladda la dhisi doonaa”, ayuu raaciyay Dr. Baadiyow.
Image captionShirka gabagabdiisa ayaa waxaa ka qeybgalay madaxda Galmudug iyo Madaxweyne Farmaajo
Previous articleMaxaa sababay in shacabka Zambia loogu baaqo yareynta cunista soorta?
Next articleWararkii ugu dambeeyay qaraxii xaley ka dhacay Muqdisho
dalka Japan oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah coronavirus Awgii
Noocyo cusub oo kaneeco ah oo laga helay dalka itoobiya kuna...